Mary Help of Christian Church Ụka - Imewe Mmewe
Mọnde 4 Ọktoba 2021
Ụka Nyere mgbakwunye nke ndi Katoliki na ịrị elu na-eme njem nleta na agwaetiti Samui, Suratthani. Mary Aid nke Christian ụka mputa e mere na a na-ejikọ aka nke ikpe ekpere, nku nku na Rays nke Mmụọ Nsọ. Oghere dị n’ime, nchekwa dịka n’afọ nne. Site na iji ogologo oge dị warara na mkpuchi dị larịị na nnukwu ọkụ mkpuchi mkpuchi ihe na-agba ọsọ na nku na-agba ọsọ iji mepụta onyinyo nke na-agbanwe ka oge na-aga na-ejigide nkasi obi nke ime. Belata ihe ịchọ mma ihe atụ na iji ihe ndị sitere n'okike dịka udo nke obi mgbe ị na-ekpe ekpere.
Aha oru ngo : Mary Help of Christian Church, Aha ndị na-emepụta ya : ่Juti Klipbua, Aha onye ahịa : JUTI architects.,co.ltd.
Satọdee 2 Ọktoba 2021
Ụka ่Juti Klipbua Mary Help of Christian Church